Moon Ọkụ Okpokoro - Imewe Mmewe
Ọkụ Okpokoro Ìhè a na-arụ ọrụ siri ike iji soro ndị mmadụ nọ n'ebe ọrụ site n'ụtụtụ ruo abalị. Ezubere ya na ndi mmadu na-aru oru gburugburu. Enwere ike ijikọ waya ahụ na kọmpụta laptop ma ọ bụ ụlọ akụ ikike. E mere ụzọ ọnwa dị ụzọ atọ dị okirikiri dịka akara ngosi na-ebili site na mbara ala ala nke ejiri igwe anaghị arụ ọrụ. Surfacekpụrụ elu nke ọnwa na-echetara onye nduzi ọdịda na ọrụ mbara igwe. Ntọala a dị ka ihe a kpụrụ akpụ n’ehihie na ngwaọrụ ọkụ na-akasi obi nsogbu nke ọrụ n’abalị.
Aha oru ngo : Moon, Aha ndị na-emepụta ya : Naai-Jung Shih, Aha onye ahịa : Naai-Jung Shih.
3dị 3d edepụtara na njiri ngwaahịa
Ọkụ Okpokoro Naai-Jung Shih Moon